နောက်တဆင့်တက်သွားကြတဲ့ ချန်ပီယံတွေ ၊ ဒီညပွဲ လွဲမယ့် မက်ဆီ ၊ ကွန်တီ ရဲ့ ပထမဆုံးပစ်မှတ်တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ - xyznews.co
နောက်တဆင့်တက်သွားကြတဲ့ ချန်ပီယံတွေ ၊ ဒီညပွဲ လွဲမယ့် မက်ဆီ ၊ ကွန်တီ ရဲ့ ပထမဆုံးပစ်မှတ်တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
November 3, 2021 - by Editor
ယမန်နေ့ ညက ကစားခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် အုပ်စု ပွဲစဉ်တွေ အပြီးမှာတော့ ဘိုင်ယန်မြုးနစ် နဲ့ ယူဗင်တပ် တို့ ဟာ သက်ဆိုင်ရာ အုပ်စု တွေကနေ ရှုံးထွက် အဆင့်ကို တက်ရောက်ဖို့ အမှတ် လုံလုံလောက်လောက် ရရှိ သွားခဲ့ ကြပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဘိုင်ယန် ဟာ အိမ်ကွင်းမှာ ဘင်ဖီကာ ကို လီဝန်ဒေါ့စကီး ရဲ့ ဟက်ထရစ် အပါအဝင် ၅-၂ နဲ့ အနိုင် ကစားခဲ့ပြီး ယူဗင်တပ် ကလည်း အိမ်ကွင်းမှာ ဇင်းနစ် ကို ၄-၂ နဲ့ အနိုင် ရရှိခဲ့ ပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး အသင်းကတော့ မယ်လ်မို အသင်းကို ဟာကင် ဇီယက်ချ် ရဲ့ တလုံးတည်းသော ဂိုးနဲ့ အနိုင် ရရှိခဲ့ ပါတယ် ။ ဒီဂိုးဟာ ချဲလ်ဆီး ရဲ့ ဥရောပ ပြိုင်ပွဲစုံ သမိုင်း တလျောက်မှာ သွင်းဂိုး ၅၀၀ ပြည့်မြောက်တဲ့ ဂိုးလည်း ဖြစ်စေခဲ့ ပါတယ် ။
PSG တိုက်စစ်မှူးကြီး လီယွန်နယ် မက်ဆီ ဟာ ဒဏ်ရာ ကနေ ကြံ့ခိုင်မှု အပြည့်အ၀ ပြန်လည် ကောင်းမွန် မလာသေးတာကြောင့် ဒီကနေ့ ည မှာ ကစားမယ့် ( လိုက်ပ်ဇစ် နဲ့ ) ချန်ပီယံလိဂ် အုပ်စု ပွဲစဉ် ကို ပါဝင် နိုင်မှာ မဟုတ်ကြောင်း အသင်းဘက်က ထုတ်ပြန် သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ကာတာ ကလပ် အယ်လ်ဆတ် ဘက်က ဝေဖန် ပြစ်တင်မှုတွေ ရှိနေပြီး ဇာဗီ ဆက်နေမယ့် အကြောင်း တတွင်တွင် ပြောဆို နေပေမယ့် ဘာစီလိုနာ ကတော့ သူတို့ရဲ့ ဂန္ထဝင် ကစားသမားကြီး ကို မကြာခင်မှာ နည်းပြသစ် အဖြစ် ခန့်အပ် နိုင်မယ်လို့ ယုံကြည် နေကြောင်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ အတွက် မနေ့ညက ပွဲမှာ ဂိုးသွင်းယူ ပေးခဲ့တဲ့ တိုက်စစ်မှူးလေး အန်ဆု ဖာတီ ကတော့ သူ့ရဲ့ သွင်းဂိုး ဟာ နှလုံးခုန် မူမမှန်တာကြောင့် ၃ လ ခန့် အနားယူ ကုသရ တော့မယ့် ဘာစီလိုနာ တိုက်စစ်မှူးကြီး အဂွေရို အတွက် ရည်စူးကြောင်း ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
တော့တင်ဟမ် ဟော့စပါး အသင်း ရဲ့ ကွင်းလယ်လူ ပီယာ အင်းမရစ် ဟော်ဘီယာ ဟာ စနေနေ့ ညက ပွဲအပြီး ကွင်းအနီးမှာ ရုတ်တရက် လဲကျ ခဲ့တဲ့ လူတဦး ကို ကူညီကာ ဆေးအဖွဲ့တွေ မရောက်ရှိ လာခင်မှာ ရှေးဦးသူနာပြုစုနည်းနဲ့ ကုသပေးခဲ့ တယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
ပေါလ် မာဆင် ကတော့ စပါး နည်းပြသစ် ကွန်တီ ဟာ တိုက်စစ်မှူး ဟယ်ရီကိန်း ရဲ့ အနာဂါတ်ကို သေချာ သတိပြု ကိုင်တွယ် ရမှာ ဖြစ်ပြီး ကွန်တီ ရောက်ရှိ လာမှုဟာ ကိန်း ကို စပါးမှာ ဆက်ထိန်းထားဖို့ လုံလောက်ဖွယ် မရှိ နိုင်သေးဘူးလို့ သုံးသပ် ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
အန်တိုနီယို ကွန်တီ ကို ခန့်အပ် အပြီး မှာတော့ စပါး ဟာ အေစီမီလန် ကွင်းလယ်လူ ဖရန့် ကတ်ဆီ ကို ခေါ်ယူ နိုင်ဖို့ စတင် လှုပ်ရှား နေပြီလို့လည်း သတင်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
ရလဒ်တွေ ဆိုးရွား နေတဲ့ နောဝှစ်ချ် စီးတီး ဟာ လာမယ့် အပတ် မှာ နိုင်ပွဲ မရခဲ့ပါက နည်းပြ ဒန်နီရယ် ဖာကီ ကို ထုတ်ပယ်သွားဖွယ် ရှိတယ်လို့ သတင်း ထွက်ပေါ်နေပါတယ် ။ နောဝှစ်ချ် ဟာ ဖာကီ ကို ထုတ်ပယ် ခဲ့ပါက ဘုန်းမောက် နည်းပြဟောင်း အက်ဒီဟိုဝီ ကို အစားထိုး ခန့်အပ် သွားဖို့ စိတ်ကူး ထားတယ်လို့လည်း သိရှိရ ပါတယ် ။
နည်းပြ အဖြစ် လုပ်ကိုင်နေပြီ ဖြစ်တဲ့ အာဆင်နယ် နောက်ခံလူဟောင်း ဆိုးကင့်ဘဲ ဟာ ပက်ထရစ် ဗီယာရာ ရဲ့ ပဲလေ့စ် အသင်းကို လာရောက်ပြီး နည်းပြ အဖွဲ့ဝင် အဖြစ် လုပ်ကိုင်ဖို့ ဆန္ဒ ရှိနေတယ်လို့လည်း သတင်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းရဲ့ အောက်တိုဘာလ အတွက် တလတာ အကောင်းဆုံး ကစားသမားဆု ကို တိုက်စစ်မှူးကြီး ရိုနယ်ဒို က ဆွတ်ခူး ရရှိ သွားခဲ့ ပါတယ် ။ ရိုနယ်ဒို ဟာ စက်တင်ဘာ လ အတွက် အကောင်းဆုံး ဆုကိုလည်း ရရှိ ထားခဲ့ပြီး အခု အကြိမ်အပါ အဝင် ၂ လ ဆက်တိုက် ဆု ရရှိ ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
Previous Article ခြင်္သေ့ပြာတို့ ဥရောပ ဂိုး ၅၀၀ ပြည့်မြောက်ခဲ့တဲ့ မယ်လ်မို ၀ – ၁ ချဲလ်ဆီး ပွဲမှ ချဲလ်ဆီး အသင်းသားတွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်များ ( Ratings )
Next Article စပါးနည်းပြသစ် ကွန်တီ ရဲ့ ပထဆုံး ပြောစကား ၊ စပါးမှာရမယ့် လုပ်ခ နဲ့ ဇန်နဝါရီ စီမံကိန်